FAQs - Juancheng Tianma Rubber & caaga Co., Ltd.
Din EN 853 1AAD
Juancheng Tianma Rubber & caaga Co., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 2006. Waxaan nahay saaraha xirfadle takhasus u-saarka iyo dhoofinta tuuboyinka Haydarooliga
FRODUCTS WAYN IYO ADEEGGA
badeecada kala qaybsan yihiin saddex taxane: tuubada muquuninta silig caag, tuubo caag tidcan silig iyo tuubo caag tidcan dharka, kuwaas oo loo soo saaray si waafaqsan Heerka SAE, Heerka din iyo heerka GB. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: R1AT / 1SN, R2AT / 2SN, 4SP, 4SH, R12, R13, R15, R17, iwm
Waxaan heysanaa koox xirfad ganacsi shisheeye dhowr sano oo waayo aragnimo dhoofinta, waxaan ku siin karaan macaamiisha adeegga lagu qanci karo. Our warshad gaar ah aad ballan qaadi karno tayada deggan a, qiimaha tartan rasmi ah iyo waqtiga dhalmada aad u gaaban.
Sida caadiga ah our qiimaha ku salaysan yahay bac hufan ama tolmo wanaagsan packing.We suunka sidoo kale ku siin kara xirxirida sariirtaada, ama xirxirida sariirtaada la sanduuqa.
Sida caadiga ah, our MOQ waa weel buuxa leh tirada kala duwan oo si tijaabo hose.For, MOQ ee size kasta waa 500 mitir.
TUSAALOOYINKA KU SAABSAN
Ka dib markii qiimaha xaqiijiyay, haddii aad u baahan tahay tijaabada ee jeegareynta tayo leh, waxaan saamiga si aad u soo diri kartaa.
Waxay ku xiran tahay tirada amarka iyo xilli aad meel hogaanka hal weel 20ft order.The ku saabsan tahay 10 - 15 maalmood, weel 40ft ku saabsan tahay 20 - 25 maalmood.
KA DIB ADEEGGA Hantida qalaad
warranty Our tayada waa ansax ah muddo 6 bilood ka dib dhalmada. Waxaan qaaday inaan magdhow haddii cillad ee tuubada waxaa keena sababo la xiriira sancada ku filneyn, laakiin aan ahayn wax cilado ka dhasha Duugga iyo jeexa isticmaalka aan habboonayn ee alaabta caadiga ah.
SIDEE AYAAN Xakamayn OUR TAYO
Waxa aanu leenahay shaybaarka baaritaanka u gaar ah, qalabka imtixaanka ka mid ah barnaamijka farmagaadho imtixaanka, modelka madal imtixaanka, Allena gaboobaya qalab, High
heerkulka sanduuqa gaboobaya iyo qalabka kale ee imtixaanka.
Sannadkii 2008, waxaan ka heli Shahaadada Ammaanka ee Ansixinta Waayo Macdanta Products
Sanadkii 2010, shirkadda ka diiwaan gashan C HENWANG" summad.
In 2011, waxaan helay shahaadada tuubada shahaadada dhoofinta.
In 2014, waxaan ku maray nidaamka maaraynta tayada ISO9001 caalamiga ah: 2008.
Cinwaanka: Jianshe Road, Juancheng County, Shandong, Shiinaha
Kacaya waa moon dhalaalaysa kor ku badda, ...
macaamiisha Indian Welcome to our warshad
Rubber Shirka Shiinaha 2018
Ku soo dhowow macaamiil Saudi Arabian to our fa ...